Barsiisaa uffata barattootasaa miiccu
Barsiisaa Tasfaayeen barattoota isaa gammachiisuun anaaf boqonnaa sammuuti jedha
Barattuu kutaa 10 kan taate Almaaz Darrasaa qormaata biyyaalessaa guutuu Itophiyaatti Wiixata eegale deessee daqiiqaa 30 booda achuma hospitaala deessetti qoramteetti.
Jappaan keessatti namoonni albeedhaan ajjeefaman
Jaappaan magaalaa Kawasaki keessatti namoonni sadi haleellaa albeedhaan ajjeefaman.
Odolli xiqqoo Ayislaand irratti argamtu Girmiseen barataan tokko qofa hafe jennaan mana barumsaa yeroof cufuufi.
Monaalizaan teeknooloojii ''Deep Fake AI'' jedhamuun lubbuu horatte
Samsun teeknooloojii Deep Fake AI jedhamuun suuraan Monaaliizaa akka sosocho'u taasiseera.
25 Caamsaa 2019
Indiyaattii ibiddi daree barnootaatti qabate barattoota 19 lubbuu dabarse
Magaalaa Suraat bulchiinsa Gujaraa keessatti barattootni gamoorraa gad utaalaanii fi kufan
Biyyoota hedduu keessatti kondomiin bilisaan akka kennamu taasifameera. Haa ta'u malee lakkoofsi namoota itti fayyadamanii yeroo gara yerootti hir'ataa jira. Maaliif?
'Ani mana maatii koo irraa ka'ee hanga mana barumsaatti guyyaa sadii deemeen barachaa ture. Har'a ijoollee koo yuunivarsiitii addunyaa beekamaa keessatti arguun gammachuukoo xumuraati,'' jedhu Dr. Moosisaa Galataa.
ALI 1996 kan hundaa'e Manni Kitaabaa Biyyalessaa Itoophiyaa waggaa 75ffaasaa kabajaa jira. Manni kitaabaa kun hundeeffamasaarraa eegalee hanga har'aatti maal hojjeteera?
Aadde Jo Aan Giriifiz: 'Otoo barreessuu danda'e silaa waa'ee turtiikoo Dambidoolloo ganna 35 nan barreessan ture'
Bara 1950 Joo Aan Girifiiz abjuu Afriikaa keessa jiraachuuf qabdu dhugoomsuuf, Itoophiyaa dhufuun dhugoomsite. Baroota hedduus dabarsite. Keessattuu turtiin koo ganna 35 Dambidoolloo keessaa adda jetti.
'Oolmaa manni barnootaa keenyi nuuf oole ni deebisna'
Barattota duraanii mana barumsaa Garba Gurraachaa sadarkaa 2ffaa meeshaalee gargaarsa barnootaa arjooman
Ministirri Muummee Abiy Ahmad ogeeyyii fayyaa biyyattii keessa jiran waliin haala walii galaa damee fayyaa biyyatttiirratti mari'ataniiru. Ogeeyyiin fayyaammoo deebii quubsaa hin arganne jedhu.
Piitar Taabichii: 'Akkamittiin barsiisaa cimaa addunyaa akkan ta'e'
Barsiisaan lammii Keniyaa Piitar Taabichii dhiyeenya kana badhaasa barsiisota addunyaa mo'ateera. BBC barsiisaa kana haasofsiiseera. Maaltu barsiisota kaanirraa adda si taasisa? Doolaara miiliyoona tokko mo'ates maalirra akka oolchu dubbata.
Godina Baaleetti Manni barumsaa Awaash Kolaatii sababii lolaan waggaa waggaatti manca'aa ture
Manni Barumsaa sad 1ffaa Awaash Kolaatii godina Baalee aanaa Barbareetti argamu sababii lolaan waggaa waggaatti manca'aa ture.
Qabiyyeen barnootaa yeroo karoorfame keessatti akka xumuramuuf hojjechaa jiraachuu Biiroon Barnoota Oromiyaa hime.
Hawaasa tokko tokko keessatti ijoolleen shamarranii harma yoo baasan balaaf saaxilamu amantaa jedhu irraa ka'uunis shaakalliwwan adda addaatiin harmi guddatee akka hin mul'annee taasisu.
Barsiisaan Saayinsii miindaa isaa harka caaluun barattoota hiyyeessa deeggaraa ture badhaasa barsiisota adunyaa bara kanaa mo'ate.